Ampio ilay mpamosavy kely amin'ny sehatra Nitrome vaovao: Magic Mansion | Androidsis
Retro, Platformer, Nitrome
Roa andro lasa izay dia nandinika tsara ny lalao video Nitrome tsara indrindra. Studio lalao video izay nahavita naneho tao anatin'ny fotoana fohy fa hainy tsara ny manao zavatra raha ny lalao video izay misy fikitihana Retro amin'ny kanto pixel, kilalao mahomby sy manokana ary toetra amam-panahy mahomby izay mamorona ny tsirairay amin'izy ireo amin'ny vatosoa kely amin'ny mahazatra, sehatra na RPG. Nitrome dia iray amin'ireo fandinihana tokony harahina ary azo antoka fa ho tafiditra ity lalao vaovao ity izany lisitr'ireo lalao video 10 maimaimpoana nataoko tamin'ny Alakamisy izany miaraka amina horonantsary manokana.
Magic Mansion no lalao video vaovao avy amin'ity studio ity izay hitondra anao amin'ny ambaratonga maro manahirana ary manasongadina izany fomba fijery sary monochrome izany izay manome azy manokana sy miavaka. Azontsika atao ve ny miresaka momba ny lalao sasany amin'ny Gameboy, satria ity console ity dia niavaka tamin'ny monochrome, koa raha tsy mitaky fatratra amin'izany gadget izany ianao amin'ny fialantsasatra avy amin'ny Nintendo, dia mila mametraka azy io ny Magic Mansion. Ao anatin'izany no hahitanao ny tenanao manampy ny mpamosavy kely hiakatra amin'ireo tilikambo sy lampihazo ireo, nanampy tamin'ny fotoana maro tamin'ny karazan'olona manana endrika tsara sy mampihomehy.
1 Sehatra manokana tiana
2 Monochrome ho zavatra miavaka
3 Lafiny teknika
Sehatra manokana tiana
ny teboka ao amin'ny Magic Mansion Zava-dehibe tokoa izy ireo, satria tsy maintsy mifantoka ianao mba hahafahanao manavaka ny atao hoe spikes sy ny sehatra tsy handratra anao. Eto dia tsy misy sisa tavela afa-tsy ny mianatra rehefa mahita maso isan'ny maty isan-karazany ilay mpilalao fototra, ilay mpamosavy kely.
El fanaraha-maso ny mahery fo dia tena tsotra, satria tsy maintsy manery ny efijery isika mba hitsambikina tsara. Mitohy ny fihetsiky ny mpamosavy kely, noho izany dia mila mitandrina ianao amin'ny fanindriana ny fitsambikinana amin'ny fotoana mety. Ny iray amin'ireo hatsarany lehibe indrindra dia ny fananany fandrika sy fahavalo marobe izay tsy maintsy hahitanao ny mekanikan'izy ireo hahafahany misoroka azy ireo ary tsy afaka mamarana ny lalao izy ireo.
Monochrome ho zavatra miavaka
Miaraka amin'ny loko, piksel ary rafitra maro samihafa amin'ny sary, manjary sarotra aloha zatra amin'ny monochrome an'ny Magic Mansion, fa marina fa manome zavatra miavaka azy io. Ary ny antsipiriany dia misy ihany koa ny sasany amin'ireo kalitao tsara indrindra amin'ity lalao video ity izay mety ho lasa ampahany amin'ny Gameboy iray.
Toy ny lohateny Nitrome maro hafa, iray amin'ireo tanjona ireo mamoha ny tarehin-tsoratra rehetra. Saingy tsy ny zavatra rehetra sisa eto, satria manana ambaratonga tsara ianao hankafizana. Tombony iray hafa dia ny fahafahanao mankafy azy io tanteraka, na dia misy aza ny micropayments. Ho eo ny dokam-barotra, saingy manana fomba hanafoanana azy amin'ny fandoavana € 2,42 ianao, ka raha raiki-pitia aminao ny lalao dia azonao atao ny mizaha ny atiny rehetra tsy misy fanelingelenana, toy ilay dokambarotra mahafaly izay mamely amin'ny fotoana tsy mety indrindra.
Azonao ilay izy maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store Ary raha nieritreritra ianao fa tsy afaka mifamatotra amin'ny mpilalao fototra amin'ny lalao na amin'ny tenanao dia tsara kokoa ny tsy manandrana an'ity sehatra mahafinaritra ity avy amin'ny iray amin'ireo studio mahalala tsara ny fanomezana ny fikasan'izy ireo mikasika manokana.
Na dia mety ho toa fomba tsy mitandrina aza izany amin'ny voalohany, rehefa manomboka milalao azy isika dia mahatsapa fa ny borosy kely indrindra amin'ny mpamosavy kely dia hitondra antsika any amin'ny faran'ny lalao. Ny endri-tsoratra dia noforonina tsara ary manana zavatra mahafinaritra izy ireo izay manintona. Ny ambiny amin'ny lalao dia eo an-dàlana hitondra antsika traikefa filokana tena tsara nefa tsy mirehareha teknika be loatra.
Fomba fijery manaitra
Ny toetran'izy ireo
Angamba zavatra lafo vidy hanesorana ny doka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Magic Mansion dia platformer retro monochrome vaovao avy any Nitrome
Ampio i Misty hitety ny tranomaizina amin'ny alàlan'ny mekanika Lost Maze manokana